မတ်လ 20, 2017
ပန်းရောင်စတား။ Sotheby's ၏ပုံရိပ်ကိုယဉ်ကျေးစွာဖြင့်။
ယနေ့ Sotheby's ကကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောသဘာဝဘဏ္treာများထဲမှတစ်ခုသည်လေလံတင်တော့မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ပန်းရောင်စတားGIA (၅၉.၆၀ ကာရက်) မှအဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီးအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၆၀ ထက်ပိုသောခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ပြည်တွင်း၌အပြစ်အနာအဆာကင်းမဲ့သောဖန်လုံးရောင်ကွက်စိန်ကို ဦး ဆောင်နိုင်လိမ့်မည် Sotheby ရဲ့ လာမယ့်Aprilပြီလ 4th ဟောင်ကောင်ခမ်းနားရတနာနှင့်ကျောက်စိမ်း။
ဤကြေငြာချက်သည်ရောင်စုံစိန်ဝယ်လိုအားမြင့်မားသည့်အချိန်တွင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်နှင့်ဤထူးခြားသောကျောက်မျက် ၏နှစ်ဆအရွယ်အစား Graff ပန်းရောင် (၂၄.၇၈ ကာရက်ရှိ Fancy Intense Pink စိန်သည်ပန်းရောင်စိန်နှင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆.၂ သန်းတန်ဖိုးရှိမည်သည့်စိန်အတွက်မဆိုကမ္ဘာ့လေလံပွဲတွင်စံချိန်တင်မြင့်တက်နေသောစိန်) သည်ရောင်းချစဉ်အတွင်းအကြီးမားဆုံးသောစိတ်ဝင်စားမှုနှင့်ဂရုပြုမှုကိုသေချာစေလိမ့်မည်။
အဆိုပါပန်းရောင်စတားကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် GIA မှအရောင်နှင့်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအဆင့်များနှင့်ကပိုင်ဆိုင်သည် IIa အမျိုးအစား gemstones အုပ်စု - ကျောက်မျက်ရတနာစိန်အားလုံး၏ ၂% သာပိုင်ဆိုင်သောအဖွဲ့ခွဲ။
Type IIa အုပ်စုမှပိုင်ဆိုင်သောကျောက်တုံးများသည်ဓာတုဗေဒအားဖြင့်စိန်လုံး၏အသန့်ရှင်းဆုံးဖြစ်သည်။
၁၃၂.၅ ကာရက်ကြမ်းတမ်းသောအာဖရိကကို De Beers မှ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်အာဖရိကမှတူးဖော်ထုတ်လုပ်သည် Steinmetz စိန် နှစ်နှစ်နီးပါးကြာအောင်ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့အထင်ကြီးလေးစားရသောထူးခြားသောကျောက်တုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။
၂၀၁၆ letterပြီလနောက်ဆုံးထုတ် GIA ၏စာအရ၊ ပန်းရောင်စတားသည်၎င်းတို့သတ်မှတ်ခဲ့သည့်အကြီးဆုံးချွတ်ယွင်းမှုသို့မဟုတ်အတွင်းပိုင်းအပြစ်ကင်းစင်သည့် Fancy Vivid Pink၊ Natural Color စိန်ဖြစ်သည်.
The Pink Star - Sotheby's ၏ပုံရိပ်ပါ ၀ င်မှု
Sotheby's Hong Kong သည်နှစ်များတစ်လျှောက်ထူးခြားသောကျောက်တုံးများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်များစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလတွင်ရောင်းချခဲ့သည့် ၁၁၈.၂၈ ကာရက်ရှိဘဲဥပုံ D- အရောင်ချောမွေ့သည့်စိန်၊ အဖြူရောင်စိန်ပွင့်များအတွက်ကမ္ဘာ့လေလံတင်ရောင်းချခြင်းနှင့်အရောင်တောက်ပသည့် ၁၀.၁၀ ကာရက်ရှိ De Beers Millennium Jewel 118.28 အပါအဝင် ၂၀၁၆ Asiaပြီလကအာရှ၌လေလံတင်ရောင်းချခြင်း
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးစိန်နှင့်ကျောက်မျက်ရတနာများစျေးကွက်ကတောက်ပနေဆဲဖြစ်ပြီး Sotheby's Hong Kong သည်ကမ္ဘာ့စံချိန်များအရ Pink Star လေလံပွဲကိုယခုနှစ်နွေရာသီတွင်လေလံတင်ရောင်းချခွင့်ရခဲ့သည်။ - Quek Chin Yeow၊ ဒုတိယဥက္ကဌ၊ အာရှနှင့် International Jewellery ဥက္ကChairman္ဌ၊ အာရှ
စိန်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်မေလတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်အများပြည်သူသို့ပြသခဲ့သည် Steinmetz ပန်းရောင်. ၂၀၀၃ မေလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် Financial Times သတင်းစာတွင် Mike Duff ကစိန်ကိုဖော်ပြခဲ့သည် “ ကမ္ဘာပေါ်တွင်တွေ့ဖူးသမျှတွင်အရှားပါးဆုံး၊ အကောင်းဆုံးနှင့်အဖိုးထိုက်ဆုံးကျောက်တုံး”.
ထိုကျောက်ကို ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးရောင်းချခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် The Pink Star ဟုအမည်ပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုဆောင်းပါး၌ပင် GIA ၏အမှုဆောင်ဒုဥက္ကand္ဌနှင့်ကာကွယ်ရေး ဦး စီးချုပ်နှင့်သုတေသနအရာရှိ Tom Moses ကဤသို့ဆိုသည် - “ ကြီးမားတဲ့ပွတ်တိုက်ပန်းရောင်စိန်ကြီးများ - ကာရက်ဆယ်ကျော်ကျော် - ဟာအရောင်တောက်တောက်နဲ့ဖြစ်ခဲခဲတာပါ။ GIA ဓာတ်ခွဲခန်းမှအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အစီရင်ခံစာများကိုနှစ် ၅၀ ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး၎င်းသည်ဒီအနက်ရောင်အနက်ရောင်ပန်းရောင်စိန်ကြီးဖြစ်သည်။ ငါတို့အမြဲတမ်းသွင်ပြင်လက္ခဏာရှိတယ်”. CC
ပန်းရောင်စတားသည်သဘာဝဝတ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူ့ဝေါဟာရနှင့်မတူပါ။ - Pink Star အတွက် ၂၀၁၃ GIA Monograph ရေးသားခဲ့သည်
Tags:လလေံပှဲ • ဟောင်ကောင် • ပန်းရောင်စိန် • Sotheby ရဲ့ • SothebysJewels
“ မှတ်ချက် ၁ ခုပန်းရောင်စတားသည် Sotheby's ၏ဟောင်ကောင်ခမ်းနားသောရတနာများနှင့် Jadeite လေလံပွဲကို ဦး ဆောင်မည်ဖြစ်သည်"
မတ်လ 23, 2017
အရမ်းကောင်းတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုရမလဲသိချင်တယ်။ ငါမသေချာဘူး :))